IVermont Isiza Kanjani Intsha Ukuyeka Ukwenza I-Vaping - 802Quits
Siza Ukumisa Ukuvota Kwentsha
UKUSIZA INTSHA YONKE EMAZINI AMA-VERMONT STOP VAPING
Ama-802Quits insizakalo esekwe ocwaningweni evela eMnyangweni Wezempilo waseVermont engasiza ingane yakho ukuthi iyeke ngempumelelo ukuqhuma.
Sekuyiminyaka ecishe ibe ngu-20, iVermont Quitline isize izinkulungwane zamaVermonters ukunqoba ukulutheka kwe-nicotine. Ngokufana nokulutha kukagwayi, ukulutha umlutha kuyinselelo yokukunqoba, kepha ngokusekelwa, ingane yakho ingayeka ukuqhuma futhi iqale ukuchuma.
Ukukhuluma nengane yakho mayelana nokulutha umlutha kungaba nzima, kepha silapha ukuzosiza.
Ukuze uthuthukise amathuba engane yakho okuyeka, kubalulekile ukuthatha isinyathelo ngokushesha. Xhumana nomqeqeshi oqeqeshiwe we-nicotine Quit Coach manje ukuze uphendule imibuzo yakho, funda kabanzi ngohlelo lwethu futhi usize ingane yakho ilungele ukuyeka ukuqhuma.
Yazi Izimpawu Zokulutha
U-50% wentsha yaseVermont uzame ukuvutha.¹
Ngabe ubona izinguquko esimeni sentsha yakho noma esesifiso sokudla? Ukuthola ama-cartridges namadivayisi ongawazi?
Izimpawu Zentsha Engumlutha Wenicotine:
Intshisekelo encane emisebenzini
Iqembu elisha labangane
Ukwenyuka kwesidingo semali
Uma uphendule ngo "yebo" kunoma iyiphi yale mibuzo, ingane yakho ingaba nomlutha we-nicotine, futhi kubalulekile ukuyitholela ukwesekwa abakudingayo.
¹Ucwaningo lwe-2019 Vermont Youth Risk Behaeve Survey
Wena Nengane Yenu Anisodwa
Intsha engu-1 kwengu-4 yaseVermont isiphumile enyangeni edlule.¹
Le nombolo iyethusa ngenxa yethonya le-nicotine elingaba nayo empilweni yentsha yakho. Ingane yakho ingacabanga ukuthi ukuphuma kungcono kunokubhema, kepha i-vape aerosol ingaqukatha amakhemikhali ahlukahlukene angama-31 angahle akhe emaphashini akho ngokuhamba kwesikhathi, abangele intsha ukuthi igule, noma yimbi kakhulu.
Noma kunjalo, awudingi ukubhekana nenkinga yokuqhuma wedwa. Abazali lapha naphesheya kwe-US bathola ukwesekwa kusuka kuzinsizakalo ezinjenge-802Quits. Ithimba lethu eliqeqeshiwe lochwepheshe namasu aqinisekisiwe angasiza ekunikeni intsha ukuzethemba namathuluzi ayidingayo ukunqoba ukuluthwa yi-nicotine.
Ukulutheka KweNicotine Akulona Iphutha Lengane Yakho
Ama-Vapes awakhiqizi umusi wamanzi ongenangozi. Zigcwele i-nicotine eluthayo kakhulu-futhi i-vape pod eyodwa ingaba nephakethe lonke likagwayi.
Iningi lentsha alazi ukuthi imiphunga iqukethe i-nicotine futhi ngesikhathi lapho ifuna ukumisa, sekwephuze kakhulu. Bayilutha.
Ubuchopho bentsha busakhula, ngakho-ke ukuchayeka ku-nicotine emafuthini kungadala ukulimala kwesikhathi eside ngokushintsha indlela ama-synapses obuchopho akhiwa ngayo. Lokhu kungashintsha unomphela isikhathi sokunakwa kwengane yakho kanye nekhono lokufunda. Ukwenza isenzo ngokushesha futhi ubambisane nengane yakho ukuze wakhe uhlelo lokuyeka olufanele kubalulekile ekuzisizeni ziyeke.
Thatha Isinyathelo Ngokushesha
Ngaphandle kosizo, ukulutheka kungaba kubi kakhulu. Kodwa-ke, ungathatha izinyathelo zokugcina ikusasa lengane yakho liqhakazile.
Ama-802Quits ayimfihlo futhi anokusekelwa okuguqukayo, okungu-24/7 ukulingana indlela yokuphila yomndeni wakho ematasa.
Xhumana ne-nicotine yethu eqeqeshiwe Yeka abaqeqeshi ukudala isu elenziwe ngokwezifiso nohlelo lokuyeka lomuntu siqu lwengane yakho.
I-My Life, My Quit ™ iyisevisi yamahhala futhi eyimfihlo yalabo abaneminyaka eyi-13-17 abafuna ukuyeka zonke izinhlobo zogwayi nokuqhuma.
I-My Life, My Quit ™ inikela ngezinsizakusebenza kubazali abafuna ukuthatha indima ebonakalayo ohambweni lwabo lokuyekisa kwentsha. Abahlanganyeli bathola:
Ukutholakala kwabaqeqeshi bokuyeka ugwayi ngokuqeqeshwa okukhethekile ekuvikeleni ugwayi kwentsha.
Izikhathi ezinhlanu zokuqeqesha ngomuntu ngamunye. Ukuqeqesha kusiza intsha ukuthi ithuthukise uhlelo lokuyeka, ukukhomba izimbangela, ukwenza amakhono wokwenqaba nokuthola ukwesekwa okuqhubekayo kokushintsha kokuziphatha.